Ciidamo Militari ah oo la wareegay Saldhiga B/wayne | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Ciidamo Militari ah oo la wareegay Saldhiga B/wayne
Ciidamo Militari ah oo la wareegay Saldhiga B/wayne
Dhismaha Saldhiga Booliiska M. B/wayne gobalka Hiiraan
Ciidamo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in maanta oo Khamiis ah ay la wareegeen maamulka saldhiga booliiska Magaalada Beledweyne ee xarunta gobalka Hiiraan.
Warkan aya soo baxay kagadaal markii shaqaaqad socotay muddo kooban oo barqanimadii maanta dhacay Saldhiga booliska oo Ku yaala qaybta Bari ee magaaladaasi sida ay sheegayaan wararka Xaqiiqa times uu ka helayo halkaasi.
Ciidamadan ayaa ka hor inta aysan gudaha u galin saldhiga waxaa ay rasaas is-weydaarsadeed ciidamo ka tirsanaa booliiska dowladda Soomaaliya hasse ahaatee markii danbe isaga baxay saldhiga, sida ay Xaqiiqa Times, u xaqiijiyeen goobjoogayaal aan qadka telfoonka kula hadalnay oo Ku sugan qaybta bari ee B/wayne.
Aritan ayaa ka danbeysay sida la sheegay khilaaf labadii maalmood ee la soo dhaafay ka dhex taagnaa hogaanka booliiska Beledweyne oo ay isku hayaan sida la sheegay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo sida muuqata mid walba dhinaciisa uu soo magacaabay taliye cusub.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cumar Baadiyoow, ayaa beeniyay in ay saldhiga kala wareegeen ciidamo booliis ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
‘’Saldhiga waxaa la wareegay ciidamo booliis iyo militari isku dhaf ah kadib markii shaqsi sheegtay in ay soo magacaawday dowladda dhexe uu la galay askar ay isku heyb yihiin’’ ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlay.
Marka laga reebo hadalka guddoomiyaha ma jiro war ka soo baxay saraakiisha militariga iyo booliiska ee ku sugan Magaalada.
Cali C/llaahi Cosbole, Hogaamiyaha Hirshabelle oo B/wayne Ku sugan ayaan wali wax hadal ah kama soo bixin oo ku aadan dhacdada maanta.
Dadka aan la hadalnay nooma sheegin wax qasaare dhaawac ah ama dhimisho ah oo ka dhalatay shaqaaqadaasi.
Xaaladda magaalada ay tahay mid degan islamarkaana ganacsiga iyo isu-socadka dadwaynaha aan saamayn sidaa u balaaran aysan Ku yeelan arintaasi.
Previous articleSafiirka Sweden u fadhiyay Soomaaliya oo la sagootiyay
Next articleRa’iisul waraare Khayre oo markii 9 kormeeray dekadda Muqdisho iyo faah-faahino kasoo baxaya